Uma sicabanga isifo esithile, abantu abaningi bafuna ukufunda izindlela ukutheleleka. Isifo sofuba yamaphaphu kungenziwa wacosha ngezindlela eziningana. Okuvame kakhulu - ngokusebenzisa emoyeni. Lesi sifo yaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Ngakho, ngo-izinsalela ezidunjini ezomisiwe odokotela wathola izinguquko ibonisa ukuthi isifo sofuba emzimbeni. Omunye umbuzo ovamile uwukuthi: "Kungenzeka yini ukuba lesi sifo?" Odokotela bathi kungenzeka ukuthi mikhulu nge imithi yesimanje. Umthetho main - isikhathi ukubona onguchwepheshe. Mayelana nesifo ikakhulukazi okuzoxoxwa ngazo esihlokweni.
Size sidlule isizwe 1882 bengingamazi, kanjani ungenwe TB. Le nguqulo eliyisisekelo has yofuzo. Ngalezo zinsuku, lesi sifo kwaba isishayo sangempela wonke kulo lonke elaseYurophu. Ngokwesibonelo, eJalimane, izinga lokufa wawumkhulu (7 abantu ngelanga).
Futhi ezithathelwanayo udokotela isifo uRobert Koch wakwazi wasiphakamisa cwaningo izifo. Ngaphansi kwe-microscope kwathiwa wahlola wamaphaphu izicubu lomkhuhlane. Ngenxa yalokho, ososayensi baye bathola ukuthi zonke iphutha izinduku mncane, iyiphi idlule emzimbeni. Lokhu kwatholakala kubika engqungqutheleni yezokwelapha. Ukuze ukutholakala usosayensi yakhe eyingqayizivele iwine uMklomelo KaNobel.
Kuze kube manje, odokotela bathi sofuba - isifo nomphakathi. Vuma kubo, njengoba umthetho, abantu musa ehola ngempela ukuphila okuvamile. It is basakaza emajele, phakathi kwabantu abampofu, imilutha futhi yezidakamizwa. Lokhu kungenxa ukungatheleleki ongaphakeme kanye nokungakwazi kwalolu umzimba ukubhekana Koch induku.
Cope ne isifo namuhla kungaba. The main umthetho - lapho izimpawu zokuqala ngokushesha uxhumane nodokotela wakho. Nguye kuphela ongabhubhisa linqume ukwelashwa. Kunoma yikuphi, kuzoba eziyinkimbinkimbi.
Ukuze sithole ukuthi kungani kukhona isifo, kubalulekile ukwazi izindlela ukutheleleka. isifo sofuba yamaphaphu idluliselwa ngezindlela ezine:
Ngemva emoyeni futhi ngamathe. Mhlawumbe indlela ezivame kakhulu. Umuntu oye kwatholakala ukuthi une-ifomu evulekile, abaxoshwayo ngokukhuluma, sneezing, ukukhwehlela phlegm. Ngalo, futhi basakaza amagciwane olungahlala emoyeni kuze kube ihora elingu-1. Ngaphezu kwalokho, kukhona kungenzeka sokulungisa amagciwane ku izingubo lesiguli, ukuxubana uthuli. izindlu inobudlabha, kunyakaze nelineni, amatshe kungathi Kulokhu asihole ukutheleleka.
Imininingwane indlela. Sithole le ndlela kancane njalo. It angadluliselwa ngokusebenzisa ulwelwesi lwamafinyila namehlo. Kulokhu, isici sokuqala kuyinto conjunctivitis oyingozi. Futhi kungenzeka ukhona-bacterium ngokusebenzisa amanxeba avulekile noma ukusikeka esikhumbeni.
Ukutheleleka ngokudla imikhiqizo engahluziwe. Kufanele acabangele isici ukuthi hhayi kuphela abantu ekuthonyweni isifo, kodwa futhi izilwane. Izinkomo kukhona abathwali, ngakho ukudla ubisi nekipyachonogo, inyama eluhlaza kungaholela ukutheleleka. Kulokhu, ama-bacterium faka esiswini, bese kuthinte-lymph kanye kuphela ke bazithola igazi lomuntu.
Utero. Ezimweni ezinjalo ezingavamile kakhulu, ngoba placenta is ivikela ngokugcwele izithelo. Nokho kukhona okuhlukile. Zokwelapha, kwakukhona izibonelo lapho usana wawusungenwe umama ogulayo.
Wonke umuntu kuncike izifo ezifana nesifo sofuba. Zindlela ukudluliswa kukhona eyaziwayo. Ukuze kungabi bikho ukubamba lesi sifo, kubalulekile ukuthobela izinyathelo nokwenza imigomo ngesikhathi esifanele.
Izindlela ikontraga TB eyaziwayo odokotela kanye nomphakathi. Kuyaphawuleka ukuthi abaningi engozini izingane kanye nabantu abadala. Njengoba for the kids, namanje esibhedlela abazali bayamenywa ukuba ubambe lokugoma ingane, okwakuyoholela ayivikele sofuba. Umgomo BCG kuphephile, kodwa yonke imiphumela efanayo kungaba, ngabo kuwe, tshela udokotela wakho. Kodwa uma ingane yazalwa umnyuziki eside, enempilo, kungabikho abakhubazekile ngokomzimba namkha ngokwengqondo, ukuze senqabele lokugoma akudingekile. Kusukela eminyakeni 4 ubudala minyaka yonke ingane kufanele wenze Mantoux test. Lokhu zokukhwabanisa elula ivumela odokotela ukuba inqume ukuthi ingozi womntwana batheleleke.
Abantu minyaka engu-55 nabo basengozini. Izindlela sofuba ukutheleleka zingase zihluke. Kodwa lo esivame kakhulu - ngokusebenzisa emoyeni. Iqiniso lokuthi amasosha omzimba ngalesi yobudala is kakhulu ziyancipha. Umzimba uqala zingasebenzi kahle. Odokotela abaningi batusa ukuba ibhekane yonyaka esifubeni X-ray ukuthola ukubukeka kwalesi sifo ngesikhathi.
Kungakhathaliseki-TB iyelapheka: indlela ukutheleleka, izimpawu zokuqala zesifo
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi uma ngokushesha ukukhomba sifo, ingelapheka. Ngakho-ke, lapho kuqubuka lesi sifo kufanele kudokotela. Ngakho, yini okufanele ibe uxwayiswe:
Ubuthakathaka, ukukhathala, isimo ngobugebengu.
Ukwanda lokushisa komzimba (akazidluli 37.5). Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ebusuku.
Ukukhwehlela elincane ingahambi yi kumasayiraphu reception, kodwa kunalokho, kuphela kwaqina.
Ubuhlungu bronchi kanye nesifuba.
Ukujuluka (ikakhulukazi ebusuku).
Izimpawu zincike Yaba yini izindlela ukutheleleka. Isifo sofuba yamaphaphu - isifo kunalokho esikhohlisayo. Akukhona njalo kungenzeka ukuba ngokushesha aqaphele. Imininingwane umzila ukutheleleka kuhambisana conjunctivitis.
Indlela yokubona sofuba
Ukuze uvimbele bhadane emazweni yokugoma, okuyinto zivikela le Koch imbewu eletha. Ngaphezu kwalokho, odokotela batusa kanye ngonyaka ukuba bahlolwe. Eyenzelwe izingane ezineminyaka engu iminyaka 4 Mantoux test. Phansi kwesikhumba injected isixazululo ekhethekile, okuvumela ukunquma ukusabela komzimba ukuze tuberculin. Udokotela alinganise ububomvu indawo lapho senziwa umjovo, umbusi ekhethekile ngale. Uma izindinganiso kuthiwa lidlule, ingane ithunyelwe ngokuxhumana onguchwepheshe TB.
Intsha kanye nabantu abadala, inqubo saziso kufanele odlulayo fluorography. Umthamo ngemisebe incane, ngakho inqubo kubhekwa kungenangozi ngokuphelele.
Kukhona izikhathi ezihambisana nalesi sifo, mayelana nokuthi iziphi izinhlelo abadala abaningi abazi. Phakathi kwabo:
Ikhono sofuba ukutheleleka nge contact.
Ama-bacterium kahle bazivumelanisa nezimo zemvelo.
Isifo sofuba, akesabi emakhazeni. Tubercle imbewu eletha lingabulewe ngisho Cryochamber lapho izinga lokushisa ifinyelela -70 degrees.
Lesi sifo nemithi eminingi, lena nobunzima labalulekile eluLwimi nokwelashwa kwezifo kungakephuzi. Ukuze uthole ngokuphelele ukuqeda kwalo, odokotela ukunikela ukwelashwa okuphelele.
Amazinga elikhulu for umsebenzi ebalulekile yamagciwane - +37 ° C.
I-bacterium bangaphila emakhasini izincwadi, amakamelo enothuli izinyanga 6.
Njengoba singabona, ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi sifo akulula, kodwa kungenzeka, sibonga amasu amasha kanye nobuchwepheshe ezisetshenziswa ukuze bayothola ukwelashwa.
Ngingaba ukuqeda lesi sifo
Ngeshwa, kule minyaka yamuva izifo ezifana nesifo sofuba kwakuvamile. Izindlela ukutheleleka zingase zihluke. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ngokusebenzisa emoyeni.
Ezigulini eziningi, kubalulekile, ngabe sifo siyelapheka. Odokotela ukunikeza kokuhlaziywa omuhle. Ngenxa yezindlela zesimanje ukusetshenziswa ne eziyinkimbinkimbi yokwelapha imithi ukwelapha isifo esibi kungaba iminyaka eyikhulu nengxenye.
Kunzima kakhulu nezingane. Inkinga iba yokuthi imithi eminingi banqatshelwe ngabo. Noma kunjalo, ngisho Kulokhu, kukhona izinto ezinhle. uhlelo ingane sokuzivikela kungcono kakhulu futhi kunamandla omdala. Into ebaluleke kakhulu - ukubona udokotela ngendlela esifike ngesikhathi, hhayi self-medicate.
ifomu Vula avaliwe zesifo: lokho?
abantu abaningi bebuza: "Kwenzeka kanjani-TB" Izindlela ukutheleleka zingase zihluke, zonke futhi incike kundlela lesi sifo. Akuwona wonke umuntu isifo ogulayo, kungaba yenethiwekhi. omunye eziyingozi kuphela ifomu evulekile isifo sofuba. Kulokhu, ngokusinikeza inala phlegm labelwe amagciwane. Odokotela bathi inqubo kungenziwa wayeka, lesi sifo kufanele lihunyushelwe isimo ukuthethelelwa, ukuvala emaphaketheni ukuvuvukala, bese ahileleke kakhulu ukwelashwa.
Kungcono ukuvimbela isifo kuka ukubhekana nokwelashwa kwayo. Ukuze wenze lokhu:
Kuqinisa amasosha omzimba. Zibandakanye ukuqeqeshwa ngokomzimba, kanye nemidlalo.
Watch out for amandla. Ukudla kufanele kube nezithelo samanje, imifino, inyama, amakhambi.
Pholisa igumbi (ikakhulukazi izinkulisa, izikole).
Izikhathi eziningana evikini kukhona zokuhlanza owomile.
ukuhamba nsuku zonke ngaphandle.
Ngemva kokuvakashela ezitaladini ugeze izandla ngensipho namanzi.
Khumbula, i-TB iyelapheka, kubalulekile kuphela esifike ngesikhathi ukufuna usizo lodokotela.
Adult ku inothi
Umuntu ngamunye kudingeka azi ukuthi:
A yenethiwekhi kungaba nesineke ogula sofuba evulekile.
Ukuze kuvikelwe izingane ekusebenzeni ngaphansi isifo, kubalulekile ukwenza BCG wokugoma. Labo izingane abaye esibuthaka sokuzivikela ezifweni, isisindo umzimba ezincane, lokugoma kungenziwa lihlehliselwe noma kwenze umgomo BCG-M.
Ukuze 100% ukuvikelwa sofuba angeke inikeze awukho umuthi wokugoma.
Ukuze uqinisekise ukuthi ingawuthinti isifo, kubalulekile kanye fluorography ngonyaka. Izingane size sifike eminyakeni yi-16 ukwenza kangcono Mantoux test.
Ukuze ukwelapha ngokuphelele lesi sifo, kubalulekile ukuba sisebenzise impatho eziyinkimbinkimbi.
Ukuhambisana inhlanzeko kuvimbela izifo.
I-ejenti causative kuzo zonke umzimba, kodwa kubonisa ukuthi lesi sifo labo linganciphisa amasosha omzimba.
Ngaphambi kokuba sihileleke ohlotsheni ukwelashwa isifo, kubalulekile ukwazi izindlela ukutheleleka. isifo sofuba yamaphaphu kuyinto ngempela esikhohlisayo. Izimpawu musa avele njalo. On ukukhathala bodwa kanye nobuthakathaka umuntu akakwazi ukunaka. Isifo sofuba siyelapheka ngokusebenzisa ukusetshenziswa amasu esimanje kanye ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe. Khumbula, lapho kuqubuka lesi sifo kufanele kudokotela!
Kungani avuvukele lymph node ngemuva ezindlebeni?
Isifo sofuba emathunjini: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Ukuhlanza ezinganeni - yini okumele ngiyenze?
Kuthiwani uma behlupha isilungulela nsuku zonke?
Origami Esilula izingane kanye nabantu abadala
Indlela yokwenza amathoyizi-amathoyizi ngezandla zakho: amaphethini
Ostrovsky Drama, isifinyezo. "The Storm" izenzo
Ognischanin - lo mbusi? Umlando izwi kuwo wonke umlando
Indlela yokuvula ebhukwini Windows
Ukuze ufunde indlela udle ukuze ube nempilo futhi bejabule
Battens kule okugeza kuka inqubo? iseluleko lochwepheshe